Firefox 100 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Addicts
Firefox 100 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Darkcrizt | 05/05/2022 19:19 | Zvirongwa
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni yeakakurumbira webhu bhurawuza Firefox 100, pamwe chete nekuvandudzwa kwebazi kwenguva refu ku91.9.0.
Mukuwedzera kune zvitsva uye kugadzirisa bug, Firefox 100 inogadzirisa 24 vulnerabilities, iyo 21 yakanyorwa seine ngozi. 17 kusasimba (yakapfupikiswa muCVE-2022-29918 uye CVE-2022-29917) inokonzereswa nenyaya dzekurangarira, senge buffer mafashama uye kuwana kune dzakatosunungurwa ndangariro nzvimbo. Nyaya idzi dzinogona kutungamira mukuitwa kwekodhi ine hutsinye kana mapeji akagadzirwa akavhurwa.
1 Main nhau muFirefox 100
2 Maitiro ekuisa kana kugadzirisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox paLinux?
Main nhau muFirefox 100
Mune iyi vhezheni itsva yeFirefox 100 yakaratidzwa kugona kushandisa panguva imwe chete maduramazwi emitauro yakasiyana kwakaiswa nekutarisa zviperengo uye izvo zvaunogona ikozvino kumisikidza mitauro yakawanda mune yemukati menyu kamwechete.
Mushanduro yeFirefox 100 ye Windows, AV1 vhidhiyo decoding hardware acceleration inogoneswa nekusarudzika pamakomputa ane Intel Gen 11+ GPUs, AMD RDNA 2 (kunze kweNavi 24), uye GeForce 30 kana iyo AV1 vhidhiyo yekuwedzera yakaiswa pane system. PaWindows, Intel GPUs zvakare ine Vhidhiyo Overlay inogoneswa neiyo default kuderedza simba rekushandisa paunenge uchitamba vhidhiyo.
PaLinux neWindows, mipumburu inoyangarara inogoneswa nekusarudzika, uko bhara remupumburu rakazara rinoonekwa chete kana mbeva yakatenderedzwa pamusoro; kana zvisina kudaro, nechero kufamba kwegonzo, mutsara wakaonda wechiratidzo unoratidzwa unobvumira kunzwisisa kupururudza kwazvino pane peji, asi kana cursor isingafambi, ipapo chiratidzo chinonyangarika mushure mechinguva.
Kudzima mabhawa emupumburu akavanzika paWindows, shandisa masisitimu ekushandisa ("System Settings > Accessibility > Visual Effects > Gara uchiratidza mascrolling bars"), paLinux, unogona kushandisa marongero ebrowser ( General > Navigation > Gara uchiratidza mitsara yekupumburudza).
Imwe shanduko inomira pachena ndeyekuti ikozvino mufananidzo-mu-pikicha modhi inopa subtitles kana mushandisi achiona mavhidhiyo kubva kuYouTube, Prime Vhidhiyo neNetflix, pamwe nepasaiti dzinoshandisa iyo WebVTT (Web Vhidhiyo Chinyorwa Track) fomati, senge Coursera.org.
Pakutanga kwekutanga mushure mekuiswa, akawedzera cheki kuti aone kutevedzera mutauro wegungano reFirefox pamwe neanoshanda sisitimu marongero. Kana paine kusawirirana, mushandisi anokurudzirwa kusarudza mutauro wekushandisa muFirefox.
Mukuwedzera kune izvi, zvinoratidzwa kutiuye yakawedzera rutsigiro rweyakanyanya simba renji vhidhiyo pane macOS pamasisitimu ane zviratidziro zvinotsigira HDR (yakakwirira simba renji).
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo chiratidzo chitsva chekutarisa chave kukurudzirwa kune zvinongedzo (semuenzaniso inoratidzwa kana ichidzokororwa pamusoro pezvinongedzo nekiyi tab): Panzvimbo pemutsara une doti, zvinongedzo zvave kuumbwa netambo yakasimba yebhuruu, yakafanana nemashandiro anoita minda yewebhu fomu. marked. Zvinocherechedzwa kuti kushandiswa kwemutsara wakasimba kunorerutsa kufamba kwevasingaoni.
Yakawedzera kugona kusarudza Firefox seyakagadzika PDF yekuona.
Kuvandudzwa kwekuita kweakanyanya nested "kuratidza: grid" zvinhu.
Yakawedzerwa rutsigiro rwe 'dynamic-range' uye 'video-dynamic-range' midhiya mibvunzo kuCSS kuona kana paine chiratidziro chinotsigira HDR (yakakwirira simba renji).
Yakabviswa tsigiro yezvisiri-standard hombe mepu yeHTTP musoro.
Finalmente kune avo vanosarudza kushandisa Snap mapakeji, ivo vachakwanisa kuisa iyo vhezheni itsva nekuvhura terminal uye kutaipa mairi
Chekupedzisira, zvakakodzera kuti titaure kuti Firefox 101 bazi ratamira kune beta yekuyedza nhanho uye kuburitswa kwayo kwakarongerwa Chivabvu 31st.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 100 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Maitiro ekugadzirisa mapikicha muLinux
Apache OpenOffice 4.1.12 ikozvino yave kuwanikwa